Afriikaa keessatti dhaabbileen amantaa teeknooloojiitti fayyadaman dabalaa jiru - BBC News Afaan Oromoo
"As waldaatti toora interneetiin galmooftee biyya hedduu keessa ta'uu dandeessa. Sababiinsaas guutummaa addunyaarratti dame qabaachuu ni dandeessa. Kanaaf, guyyaa gaafa galmoofteerraa kaasee ati soofiweerii jaarmiyaa addunyaati."
Jedha Hundeessitoota afur keessaa tokko kan ta'eefi gaggeessaan Asoriibaa kan waldaawwaniif sooftiweer manaajimentii dhiyeessu Naanaa Agimaan-Pireempeeh Gaanaarraa.
Sooftiweeriin kun waldaaleen amantaa karaa appilikeeshinii bilbila arkaafi ergaa gababaa amantoota waliin akka wal arganiifi caalmaatti wal hordofuuf, akkasumas kennaawwan tola ooltummaafi kurneffaa karaa interneetii akka waliiti qabaniif gargaara. Tokkoo tokkoo miseensa waldaafis qabiyyee ergaa akka dhuunfaaf tolutti waliif erguu ni danda'u.
Kampaniin kun bara 2014 tti hundeeffamee dhumarra akka Afirikaatti hojii uumuu tokkoffaa ta'ee gorgommii Idile-Addunyaa mo'ateera.
Ilma Soortuu kan ta'e Agiimaan-Pireempeeh dura rakkoowwan namoonni waldaawwan amantaa Gaanaa gaggeessan mudatu arge - arca'insa to'achuufi maallaqa hordofuu, miseensota waldaa waliin hanqina hirmaannaafi komunikeeshinii jiru, akkasumas rakkoo sagantaawwan beeksisuu.
Inniifi waa'eloonni inni waliin hundeesse hundi isaan kan kiristaana ta'an carraa hojii karaa kanaa jiraatus adda baasan.
"Waldaan duraanuu meeshaalee ni bitaThe - namootaaf uffata; mana barumsaa ijaaruu; waldoonni baayyeen yeroo qilleensaa raadiyoofi TV kaffalu - kun waan haaraa mit," jechuudhaan karoora tajaajila isaa Gaanarra darbee gara Tanzaaniyaa, Gaambiyaa, Naajeeriyaafi Keeniyaatti jiru dubbate.
"Gabaadhumatti tekinooloojii jiru akka ta'utti tolfatanii hojii ofii akka hojjetu taasisuudha," jedha.
Goodayyaa suuraa Absorbiyaatiin kennaa dhiyeessuuf filannoo heduuti jira karaa appilikeeshinii akka siif kadhatamuuf soortuu/paasterii kee gaafachuu ni dandeessa
Ka'umsi guddaan, soortuun ganda baadiyyaa jiru salphaatti karaa appilikeeshinii mobaayilii waldaa muummichaa qunnamuufi galmee namoota argamanii qabachuu danda'u jedha , jechuun dubbata Agiimaan-Pireempeh gaaffiifi deebii BBC waliin bara kana taasise.
Appilikeeshiiniin 'Church Plus' jedhu kan Piiter Ihesiitiin Naajeeriyaa keessatti bara 2013 hundeeffames hojii walfakkaatu hojjeta. Rakkoowwan hojjetoota waldaa kiristaanaa mudatan, fakkeenyaaf kan maatii haadha manaasaa argee taajjabuun fala eegale.
"Yeroon hojii IT keesa seenu rakkoo isaaniif sooftiweerii tokko nan argaaf jedheen yaade," jechun dubbata.
Goodayyaa suuraa 'Church Plus' yeroo leenjii bulchitootaaf kennutti
Rakkoon guddaan Asorbiyaa, 'Church Plus' fi appilikeeshinoota amantaa biroo akkasumas tajaajillawwan marsariitii mudatu nageenya daataadha.
"hojii wal amantaan hojjetamudha," jedha Agiimaan-Pireempeh. "Dhimmi daataan ammam nagaan eegama kan jedhu yaaddoo sirriifi kan dhufaa jirudha.
"Namoota miliyoonaan lakkaa'amaniif daataa kuusna, kunimmoo ragaa/daataa sobaa miti... jireenya namaa dhimma waldaa kiristaanaa waliin walqabatudha."
Yaadoon kun akka dhugaa ta'uu mala.
Qorannoon dhaabbata nageenya marsaaleen interneetii Piruufpooyinti jedhamu bara 2015 ergaawwan sobaa toora appilikeeshinii amantaa eeggatan ilaaleen hunda caalaa kan itti fakkaassan ergaawwan Kitaaba Qulqulluuti.
Goodayyaa suuraa Lallabaan Waldaa Kiristaanaa Guyyaa hundaa Fiil Muur lallaba viidiyootti waraaba
Yaaddoon nageenyaa jiraatullee, namoonni baayyeen appilikeeshiniin kun karaa caalaa qajeelaa ta'eefi humaan kan tolfamedha jedhanii amanu.
Akka qorannoon Wiirtuun Qorannoo Peewu tilmaamutti bara 2050 tti kiristaanota Addunyaara jiraatan 10 keessaa afur Afirikaa Saaraan gadi keessa jiraatu - akkasumas baayyinni Musiliimaa Addunyaas akkuma sana guddata.
Qaasim Ismaa'el bara 2008titti Afirikaa Kibbaa keessatti appilikeeshiniifi maxxansaan Marsariitii Madda-odeeffannoo Musiliimaa hundeesse. Yaadichi Musiliimota daawwannaa deemaniif odeeffannoo kennuufifi namoota naanno jiran waliin walqabsiisuudha.
"Haalli jireenyaaf barbaachisu akka Shariyaa keessaa jirutti yoo naannoof haarawa taate rakkisaa ta'uu danda'a," jedha Ismaa'el.
"Waantonni barbaachisan kan akka mana nyaataa halaal, bakka bultii halaal, masjiida dhiyootti argachuu ykn bakka barbaachisaa ta'ettis bakka awaalaa. Yeroon ssagadaa bakkaa bakkattilleen addaa adda ta'uu danda'a.